UK oo u baroordiiqaya Amiir Philip oo ahaa seyga boqorodda Britain Queen Elizabeth | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii UK oo u baroordiiqaya Amiir Philip oo ahaa seyga boqorodda...
UK oo u baroordiiqaya Amiir Philip oo ahaa seyga boqorodda Britain Queen Elizabeth
Dadweynaha Ingiriiska ayaa u baroordiiqaya Amiir Philip oo ahaa seyga boqorodda Britain Queen Elizabeth, kaas oo jimcihii shalay ahaa geeriyooday, iyadoo dadka loogu baaqay inay guryahooda ku baroordiiqaan oo aysan iskugu soo bixin qasriga boqortooyada.
Waxaa dadweynaha baroordiiqaya loogu baaqay inay ilaaliyaan tilmaaha kala fogaashaha si loo yareeyo faafitaanka cudurka Covid19.
Amiir Philip, oo ahaa 99-jir ayaa lagu tilmaamay inuu ahaa shakhsi gacan ka gaystay horumarinta iyo hoggaaminta qoyska boqortooyda Ingiriiska, wuxuuna hormuud u ahaa xallinta caqabado dhowr ah oo la soo gudboonaaya aqalka boqortooyda oo loo yaqaan Buckingham Palace 70-kii sano ee la soo dhaafay.
“Runtii waan ka xumahay geeridan murugada leh, tacsina waan u diraynaa qoyska boqortooyda” ayay tiri Victoria Hasler oo degan London oo la hadleysay wakaalada wararka ee Reuters.
Dadka qaar waxay ubaxyo dhigayeen darbiga qadiimiga ah ee Windsor Castle, inkastoo dowladda Ingiriisku codsatay inaan la imaan aqalka boqortooyda, hadana ma jirin cid amarkaas aqbashay.
“Iyadoo la tixgalinayo bad-qabka dadweynaha, lana raacayo tilmaamaha dowladda waxaan bulshada ka codsaneynaa inaysan dad badan isku imaan. Dadka doonaya inay muujiyaan dareenka tacsida waxaa laga codsanayaa inaysan imaan aqalka boqortooyda” ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay xaafiiska warfaafinta ee boqoradda Ingiriiska.
Calanka Ingiriiska ayaa hoos loo dhigay, si maamuuso Amiir Philip, iyadoo dowladda Ingiriisku ay sheegtay inay baroorqiiq qaran u sameyso.
Previous articleGuddoomiyaha gobolka Nugaal oo dowladda federaalka ku eedeeyay in ay caqabad ku noqotay dhismaha wadada daawo
Next articleHogaamiyaha Jarmalka Angela Merkeloo oo Putin ugu digtay inuu joojiyo ciidamada uu kusoo daabulayo xuduuda u dhaxaysa Ukraine iyo Ruushka
Madaxweyne Jubbland oo taageeray in shirka lagu qabto Muqdisho
Jubbaland ayaa iyana la safatay Puntland. War goordhaweyd ka soo baxay xafiiska madaxweyne Madoobe ayaa lagu yidhi: "Jubaland waxay tixgelin siinaysaa kana qayb galaysaa shirka lagu...
Hay’adda dhanka tartamada ee Faransiiska oo shirkadda Google ku ganaaxday 267...
Madaxweynaha waqtiga ka dhacay oo Xalay kula shiray Madaxtooyada maamul Goboleydyada...
Ha’yadda Amnesty oo maamulka Puntland ku eedaysay Xadgudub ka dhan ah...
Ciidamada xoogga dalka oo werar ku qaaday deegaanka Seydheelow oo Al-Shabaab...
UNHCR oo sheegtay in Muqdisho ay ka barakaceen maalmihii...
Mohamed Abdullahi Mohamed - February 26, 2021 0